निषेधाज्ञाको बेला सोच्नै नसकिने गरी यति धेरैले घ’ट्यो सुनको भाउ , तोलाको कतिमा झ’र्यो ? – Dailny NpNews
निषेधाज्ञाको बेला सोच्नै नसकिने गरी यति धेरैले घ’ट्यो सुनको भाउ , तोलाको कतिमा झ’र्यो ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ११, २०७८ समय: १४:४२:३५
काठमाडौँ– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ ।तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार ५०० रूपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर छ । आज चाँदी प्रतितोला १ हजार ३५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अक्सिजनको सहायता लिँदै भान्छामा महिलाको तस्वीर भाइरल
एजेन्सी, ११ जेठ । सामाजिक सञ्जालमा एक महिलाको स्तब्ध पार्ने तस्बीर भाइरल भएको छ । फोटोमा महिलाले अक्सिजनको सहायता लिदै भान्छामा खाना बनाउँदै गरेको देखिन्छ । यो फोटो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा हंगामा मच्चिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा महिलाको फोटोको विषयमा आक्रोश र पीडा पोखिरहेका छन् ।
भाइरल भएको यो तस्वीरले सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहेको छ । अक्सिजनको सहयोग लिइरहेकी ती महिलाको फोटो त्यत्ति सफा छैन् । यद्यपि यसको बारेमा हालसम्म कुनै आधिकारीक जानकारी आएको छैन् ।
भाइरल भएको फोटोलाई ट्विट गर्दै क्रोध पोखिराखेका छन् । भारतीय गायिका चिन्मयी श्रीपदाले फोटोमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी छिन्, ‘के बिना शर्त माया हुन सक्दैन्, यी महिलालाई आराम गर्न नदिएर यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न बाध्य बनाइयो ।’ अर्का प्रयोगकर्ता मोहम्मदलीले लेखेका छन्, ‘यो प्रेम होइन् सामाजिक कपडाको गुलाम हो ।’
६३४ पटक हेरिएको